ပဋိပက္ခကောင်းမွန်သော Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုမှမရှိမဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်
With positive conflict, you will need to focus onaway to get all team members to “win.” As project manager, it’s easy to assignawinner andaloser to an argument, but the goal here is take the personal emotions out of winning or losing and have the focus be on the company, not the individual. In order to do so, you need to create goals from shared group interests. You need to tie performance goals to team goals instead of individual goals. လည်း, welcome constructive criticism while also privately commenting on unhelpful comments.
Now that you are more familiar with the benefits of healthy conflict, take what you have learned here and implement it in your role. If you are just beginning your journey to becomingaproject manager, make sure you chooseatop PMP prep course that understands and reinforces this idea of positive conflict. ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ ဝန်ကြီးချုပ် PrepCast သူတို့တစ်တွေမူထူးခြားတဲ့ရှိသည်ကြောင့်, အိမ်မှာကဤစီမံကိန်းသည်စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံမူမောင်းကိုကူညီပေးပါတ-on-one နည်းပြချဉ်းကပ်.
THE BEST PMP ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်!
PMI-ACP စာမေးပွဲ့ Prep သင်တန်းများ
CAPM စာမေးပွဲ့ Prep သင်တန်းများ
Wiley, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 40 uses today
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $50 on your purchase of the Sybex PMP® Exam Review Course foralimited time only!
ဝန်ကြီးချုပ်သင်တန်း, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး, ငွေကြေးကမ်းလှမ်းချက် 36 uses today
ဝန်ကြီးချုပ်သင်တန်း 39 uses today
Simplilearn, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 38 uses today
Simplilearn, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး, ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ 33 uses today
PM Master Prep, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး, ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ 39 uses today
ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ PrepCast, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 40 uses today
ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ PrepCast 36 uses today
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $700 Lean Six Sigma Black Belt Training
ခြောက်လ Sigma အမှီ, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 40 uses today
ခြောက်လ Sigma အမှီ 39 uses today
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $616 Lean Six Sigma Green Belt
ခြောက်လ Sigma အမှီ, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 37 uses today
ခြောက်လ Sigma အမှီ 33 uses today
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $150% on Grey Campus Live-Online and Live
Grey ကကျောင်းပရဝုဏ်, နက်ရှိုင်းသောအထူးလျှော့စျေး, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 39 uses today
Grey ကကျောင်းပရဝုဏ် 40 uses today
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $150 on Grey Campus Live-Online and Live Classes for PMP, PMI ဟာ-ACP, and Six Sigma
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် 50% on Grey Campus Self-Learning Courses
Grey ကကျောင်းပရဝုဏ်, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 38 uses today
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် 50% on Grey Campus Self Learning (On-Demand) Courses for PMP, PMI ဟာ-ACP, CAPM and Six Sigma
Simplilearn, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး, ငွေကြေးကမ်းလှမ်းချက် 41 uses today
CAPM စာမေးပွဲ့ Prep
PMI ဟာ ACP စာမေးပွဲ
PMI ဟာ ACP ပြန်ကြားရေး